Magician Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi Online ➡️
Yenza ubuchule kwaye uhlale uvulekile, amathuba akho anokuphela.
Intsingiselo yekhadi le-tarot «Umlingo»
Ngokwesiko, Umlumbi ngomnye onokubonisa umlingo osebenzayo -njengokuphilisa, amasiko aguqukayo, ukuhanjiswa kwealchemical, iindleko ze-talisman, nokunye okunjalo. IWizard yanamhlanje nabani na ogqiba ukujikeleza phakathi kwezulu nomhlaba; umntu owathi Ufuna ukukhupha igolide kaThixo ngaphakathi kuye.
Ekuzalweni kweTarot, kwanomphilisi onesiphiwo owayengenguye umfundisi omiselweyo waqwalaselwa kwiligi kunye umtyholi! Ngezizathu ezicacileyo, yenaumgca phakathi kokukhohlisa amehlo ngobumnandi besandla kunye nokutshaja umhlaba ngentando yomlingo, ayicaciswanga ngokucacileyo kwi Ekuqaleni amakhadi e-tarot.
Umfanekiso we Waite u-El Mago njengesiqhelo sedwa Ukunxibelelana noomoya bezinto-kunye nolungelelwaniso lwayo olusesikweni lweempawu-luphawu lwenkululeko esinayo kumaxesha anamhlanje yokubhengeza umgaqo-nkqubo wethu wokomoya ngaphandle koloyiko lokuziphindezela. Oonobumba bakudala khange bacace gca malunga nento eyenziweyo nguMlingo. Kungcono gcina umbono wakho uvulekile ngeli khadi. Zibone ngeso lengqondo ubonakalisa into eyahlukileyo, ekhokelwa yimikhosi yokuzivelela evela ngokuzenzekelayo ngaphakathi komphefumlo wakho.
Thembela ukuphefumlelwa kwakho. Ukrelekrele kunokuba ucinga.
Yiba nokholo kubuchule bakho bendalo. Umlumbi ukucebisa ukuba unike imeko yakho yokubuza kunye nengqondo yokuzibandakanya ngokukhululekileyo indawo eninzi yokuphanda umba osondeleyo. Ziphathe ngokungathi unesayensi evulekileyo nenomdla. Ngale nkqubo, wena inokuzisa ukutsha kunye nokucaca kwimeko Ezikhuthazayo kunye nezikhuthazayo.
Awunyanzelekanga ukuba uqonde yonke into ngokwasengqondweni. Ukongeza, Intuition yeyakho i-ace up up sleeve yakho. Phendula ngokukhawuleza kwizinto eziphambi kwakho. Akukho sizathu sokuzibamba. Iminqweno yakhe yendalo yile nto iyifunayo, kwaye isitayile sakhe se-naivety kunye nesimbo esihle siya kunceda ekunciphiseni nakuphi na ukungonwabi.